ဒီတပတ် English-American Style Idioms ကဏ္ဍမှာ တင်ပြပေးမယ့် အီဒီယံတွေက Stump, Spin doctor နဲ့ Jump on the bandwagon တို့ဖြစ်ပါတယ်။
Stump တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်ကတော့ သစ်ငုတ်တို ဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု တည်ထောင်စက အမေရိကန်လူမျိုးတွေအနေနဲ့ မြေရိုင်းတွေကို လယ်မြေအဖြစ် အသုံးပြုဖို့ နှင့်မြို့ ရွာများတည်ဖို့ သစ်ပင်တွေ ခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းကြပါတယ်။ ထိုစဉ်က မြို့ သစ်ရွာသစ်တွေဆီကို နိုင်ငံရေးသမားတဦးလာပြီး မဲဆွယ်တဲ့အခါ သူဟာ လူအုပ်ကြီးကို စကားပြောရာမှာ သူ့ ကို မြင်နိုင်ကြားနိုင်အောင် သစ်ငုတ်တိုပေါ်တက်ပြီး နိုင်ငံရေးတရား ဟောရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်တွေကြာလာတာနဲ့အတူ သစ်ငုတ်တိုလို့ အဓိပ္ပါယ်ရပြီး နာမ်အဖြစ် အသုံးပြုတဲ့ Stump ကို ကြိယာအဖြစ်လည်း အသုံးပြုလာပြီး အဓိပ္ပါယ်ကတော့ နိုင်ငံရေးမဲဆွယ်တရားဟောဖို့ တနေရာကနေ တနေရာ လှည့်လည်သွားလာခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အခုဆိုရင် နိုဝင်ဘာလ (၈) ရက်နေ့ ကျင်းပမယ့် အမေရိကန်သမ္မတ ရွေးကောက်ပွဲဟာ တစ်လခွဲကျော်ကျော်ပဲ လိုတော့တာမို့ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီက သမ္မတလောင်း ဟီလာရီ ကလင်တန် (Hillary Clinton) နဲ့ ရီပတ်ဘလင်ကန်ပါတီ သမ္မတလောင်း ဒေါ်နယ် ထရမ့် (Donald Trump) တို့ဟာ အကြိတ်အနယ် မဲဆွယ်လှုပ်ရှားနေကြပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် သူတို့နှစ်ဦးဟာ ဘယ်ပါတီက နိုင်မယ်ဆိုတာကို သေသေချာချာ မပြောနိုင်သေးတဲ့ ပြည်နယ်တွေကိုသွားပြီး အလေးပေး မဲဆွယ်လှုပ်ရှားနေကြတာ သတင်းမီဒီယာတွေမှာ အမြဲပဲတွေ့နေရပါပြီ။ အခုလို ပြည်နယ်တွေကို သူတို့ကိုယ်တိုင်သွားပြီး မဲဆွယ်လှုပ်ရှားတာကို Stump လို့ ပြောလို့ရပြီး၊ သူတို့ မဲဆွယ်ရာမှာ ပြောကြားတဲ့ မိန့်ခွန်းတွေကို Stump speeches လို့ ရည်ညွှန်းပြောပါတယ်။ ဒီအသုံးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဥပမာကို လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ။
The Governor is running for re-election . So far, he has given stump speeches in over fifty cities.
ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုးက ပြန်ဝင်အရွေးခံ မှာဖြစ်တဲ့အတွက် ခုထိတော့ သူ မဲဆွယ်မိန့်ခွန်း တွေလှည့်လည်ပြောခဲ့တာ မြို့ ပေါင်း (၅၀) ကျော်သွားပြီ၊၊
(၂) Spin doctor
Spin (လှည့်တာ၊ လည်စေတာ)၊ doctor (ဆရာဝန်) ဆိုတော့လည်နေတဲ့ ဆရာဝန်လို့ တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်ရပြီး၊ အီဒီယံအဓိပ္ပါယ်ကတော့ မကောင်းတာကို ကောင်းအောင် ကြည့်ပြောတတ်တဲ့ လူပဂေး၊ အနုတ်လက္ခဏာကို အပေါင်းလက္ခဏာဖြစ်အောင် ပြောတတ်တဲ့လူမျိုးကို ဆိုလိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်ရွေးကောက်ပွဲ တွေနီးကပ်လာချိန်မှာ ရုပ်မြင်သံကြားကနေ မဲဆွယ်လှုပ်ရှားတာ သိပ်ကို အရေးကြီးလှတဲ့အတွက် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတို့အနေနဲ့ Spin doctors တွေကို ငှားရမ်းလေ့ ရှိပါတယ်။ Spin doctor ကတော့ ရုပ်မြင်သံကြားနဲ့ စာနယ်ဇင်းတွေမှာ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတဦးကို လူကြိုက်များအောင် စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်တဲ့ ပါရမီ ပါသူ၊ လူထုဆက်ဆံရေး ကျွမ်းကျင်သူတဦးကို ဆိုလိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာကို လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ။
Both candidates have scandals so they really need good spin doctors !
ကိုယ်စားလှယ်လောင်းနှစ်ဦးစလုံးက အရှုပ်တော်ပုံတွေနဲ့ပတ်သက်နေတာကြောင့် ၊ သူတို့ နှစ်ဦးစလုံး ဝေဖန်ခံရတာသက်သာအောင်လုပ်ပေးနိုငိမဲ့တော်တဲ့အကြံပေးတွေတော့လိုနေပြီ။
(၃) Jump on the bandwagon
Jump on (အပေါ်ကို ခုန်လိုက်တာ)၊ the bandwagon (အတီးအမှုတ်နဲ့ ဖျော်ဖြေသူတစုကို သယ်ယူပို့ဆောင်ပေးတဲ့ လှည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သမိုင်းကြောင်းကို ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရုပ်မြင်သံကြား မပေါ်မီခေတ်က နိုင်ငံရေးသမားတွေအနေနဲ့ လူထုရဲ့  အာရုံကို ရနိုင်ဖို့ အတီးအမှုတ် ဖျော်ဖြေသူတွေပါတဲ့ လှည်းတွေမှာ သူတို့နာမည်ပါတဲ့ကြော်ငြာတွေကပ်ပြီး လှည့်လည်မဲဆွယ်ခဲ့ကြပါတယ်။ အတီးအမှုတ်သမားတွေကလည်း လူအုပ်ကြီး ဝိုင်းလာအောင် ကျယ်နိုင်သမျှကျယ်အောင် တီးမှုတ်ကြပါတယ်။ ဝင်ရောက်ရွေးချယ်ခံမယ့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းကို လူကြိုက်များတယ်လို့ ယူဆရင် ပမွှားနိုင်ငံရေးသမားတွေက အဲဒီကိုယ်စားလှယ်ရဲ့  မဲဆွယ်တဲ့လှည်းပေါ်ကို ခုန်တက်ကြပြီး “ကျုပ်တို့တော့ ဒီကိုယ်စားလှယ်ဘက်ကဟေ့” ဆိုပြီး ထောက်ခံရာကနေ ဒီအသုံး ဆင်းသက်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ခုခေတ်မှာတော့ အတီးအမှုတ်သမားတွေကို လှည်းပေါ်တင်ပြီး လိုက်လံမဲဆွယ်တာမျိုးတော့ မရှိတော့ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့လဲ နိုင်ငံရေး ယုံကြည်ချက်ကို Bandwagon လို့ ရည်ညွှန်းပြောဆိုကြပြီး အဖွဲ့စည်းတခုခု၊ ပါတီတခုခု အယူအဆသစ်တခုခုကို သဘောကျလို့ ထောက်ခံသူများတဲ့စာရင်းထဲပါတာကို Jump on the bandwagon ဆိုတဲ့ အသုံးကို ရည်ညွှန်းအသုံးပြုကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒီအသုံးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဥပမာကို လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ။
Many voters jumped on the bandwagon of the popular Governor as he promised the voters to crackdown on corruption.
မဲဆန္ဒရှင်အတော်များများ က အ၈တိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ပေးမယ်လို့၈တိပေးခဲ့တဲ့ လူကြိုက်များနေတဲ့ ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကိုဝိုင်းထောက်ခံနေကြပြီ။
ဒီသတင်းပတ်တင်ပြခဲ့တဲ့ အီဒီယံအသုံးအနှုန်းများမှာ Stump, Spin doctor နဲ့ Jump on the bandwagon တို့ဖြစ်ပါတယ်။